Bixinta dirista ubaxyada.
Ilaa hadda, waxaa jira laba ikhtiyaar oo lacag bixin ah oo loo heli karo dalbashada ubaxyada:
1. Kaararka bangiga
Waxaad ku bixin kartaa VISA, VisaElectron, MasterCard, Maestro, kaararka MIR, iyo waliba intaa dheer, kaararka nidaamka lacag bixinta ee caalamiga ah - VisaInternational, MasterCardInternational, DinersClubInternational, AmericanExpress.
Nidaamka bixinta dalabku waa mid fudud oo macquul ah:
Bixinta kaararka waxaa lagu fuliyaa nidaamka lacag bixinta otomaatiga ah "CloudPayments". Toban daqiiqo gudahood waad diidi kartaa inaad bixiso amarka. Haddii waqtigu ka batay, oo aadan go'aan ku gaarin amarka, markaa dalabka waa la joojinayaa.
Shahaadada u hogaansanaanta PCIDSS "CloudPayments":
Iyadoo aan laga weecin shuruudaha nidaamyada lacag-bixinta caalamiga ah, si kor loogu qaado heerka amniga, tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ayaa la adeegsadaa - 3D Secure / SecureCode. Waxaad buuxineysaa foomka, waxaad ku xaqiijineysaa lacagtaada adoo isticmaalaya badhan gaar ah waxaadna gashaa nambarka laga soo qaatay SMS-ka ee qeybta saxda ah. Waxaa laguu diidi karaa lacag bixinta kaliya haddii bangigaagu aanu haysan wax caddeyn ah oo ku saabsan adeegsiga tikniyoolajiyaddan.
Haddii aad rabto inaad ka hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan bixinta amarrada kaarkaaga ee internetka, si aad u xalliso dhibaatooyinka bixinta, wac adeegga taageerada bangiga lambarka ku qoran kaarka.
2. Lacag la'aan lacag la'aan ah hay'adaha sharciga ah
Hay'adaha sharciga ah waxay ka bixiyaan amarrada koontada hadda jirta, sida ku cad qaansheegyada ay soo saartay nidaamka.
Si aad u hesho qaansheegta bixinta, markaad amar bixinayso, dooro habka lacag bixinta ee hay'adaha sharciga ah kuna qor faahfaahinta ururkaaga qaab kooban isla markaana nidaamku wuxuu si toos ah ugu diri doonaa qaansheegadka cinwaanka emaylka la cayimay:
Ka dib markaad hesho lacag bixinta, waxaad heli doontaa SMS, emayl iyo ogeysiin ku jirta koontadaada gaarka ah in amarka la howlgaliyay.